Filimka Uri – The Surgical Strike oo ku socdo inuu HIT noqdo iyo ganacsiga uu maalintiisa labaad sameeyay – Filimside.net
Filimka Uri – The Surgical Strike oo ku socdo inuu HIT noqdo iyo ganacsiga uu maalintiisa labaad sameeyay
Inaba caadi ma ahan Vicky Kaushal, Yami Guatam iyo Paresh Rawal filimkooda Uri – The Surgical Strike ayaa sare u kac 40% ah sameeyay maalintiisa labaad ama sabtigiisa kowaad wuxuuna keenay 11.75 Crore ilaa 12 Crore ganacsi u dhaxeeyo. Waana heer sare ah maalintiisa labaad tilaabada uu qaaday taasi oo muujineyso in filimkan cagta la helay wadadii uu HIT la yaab leh ku noqon lahaa.
Filimka Uri ganacsi wacan wuxuu ka sameeyay Mumbai, East Punjab iyo West Bengal, sidoo kalena ganacsigiisa Delhi / UP ma xumo inkastoo UP uu ku yara liito. Filimkan ayaa mudo labo maalmood ah soo xareeyay 20 Crore ganacsi gaarayo waana ganacsi wacan sidoo kalena maanta oo Axad ah sare u kac xoogan inuu sameeyo ayaa laga filaa madaama sheekadiisa daawadayaasha ka heleen sidoo kalena maanta ay tahay maalin nasiino.
Fadlan hoos kaga bogo Uri mudo labo maalmood ganacsiga uu sameeyay soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Sabti – 11.75 Crore
Dhinaca kale filimka The Accidental Prime Minister ee Anupam Kher iyo Akshaye Khanna hogaamiye ka yihiin ayaa sameeyay sare u kac xadidan maalintiisa labaad oo ah 15% taasi oo ka dhigan in sabtigiisa kowaad uu keenay 4 Crore sidoo kalena mudo labo maalmood ah uu soo xareeyay 7.50 Crore (Trade Figure).
Filimka The Accidental Prime Minister ganacsigiisa mudo labo maalmood ah ma xumo inkastoo filimka Uri ka saameyn badnaaday haddana haddii maanta oo Axad ah sare u kac kale sameeyo sidoo kalena laga bilaabo Isniin ilaa Khamiis uu is celiyo wuxuu heli doonaa fursad uu kusii socdo ganacsi ahaan todobaadkiisa labaad.
Fadlan hoos kaga bogo The Accidental Prime Minister iyo mudo labo maalmood ah ganacsiga uu sameeyay soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Wadarta Guud – 7.50 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqrisay 89